Nzira yekuita chiuno chakaonda sei?
Fitness Deredza uremu nemitemo
Chiuno chine tsvina, kunyange kana uine mamwe mapaundi, anoita kuti chero musikana asakanganise. Zvinokosha hazvizi kilograms uye masentimita, asi zviyero: kana chiuno chako chikamu chimwe chetatu chiduku pane chiuno nemapfupa, iwe uchaita sechitarisika uye chakanaka. Zvisinei, izvi zvakaoma zvikuru, nokuti muviri wechikadzi unofarira kuunganidza mafuta aripo munzvimbo ino. Kunyange zvakadaro, kana iwe uchida kuwana chimiro chakanaka uye udzidzira maitiro ekuderedza chiuno, migumisiro ichave yakaisvonaka mumwedzi 1-3.
Iko kukanganisa kukuru, kana kuti haukwanisi kuwana aspen chiuno
Muchido chavo chekuwana mishonga inonakidza, vasikana vanowanzoita zvikanganiso, izvo zvinongopedza kubudirira kwechinangwa chinodiwa. Usati waedza kuderedza chiuno chako kumba, yeuka mitemo iyi iri nyore ichakubvumira kuti utsungirire basa racho nokukurumidza uye nyore.
Usaisa zvinangwa zvisingaiti. Usaedza kuwanikwa paInternet kuti ungaita sei chiuno chidiki kwevhiki. Hapana nzira yakarongwa ichashanda munyaya iyi. Tora zvishoma kuti iwe wakatora chimiro chako kwenguva yakareba, uye mwedzi inenge kusvika ku3 yekugara uchiita zvinoda kuidzorera. Mukuwedzera, kana iwe uine huwandu hwakawanda huripo hwechiwero (chiuno chetambo kupfuura masendimita 18), zvichida chiuno chakasvika masendimita 60 - zvakajeka kwete chakanaka chako chakanaka. Rega musiyano pakati pechiuno nehudyu uve anenge masendimita 30 - izvi zvakakwana kutarisa zvakanaka.
Usarerekera kumativi. Tirting to the side (chimiro chakarurama, makumbo pahupamhi hwemapfudzi, mune rumwe rutivi rwechigumbuso, rimwe riri shure kwe musoro) ibasa rinopesana nevanasikana vanoda kuve nechiuno chine simba. Ichi chiito chinobatsira kuwedzera chiuno kuburikidza nekukanda musimboti wemisasa uye kuoneka kunowedzera chiuno.
Usarega kuita zvekuita aerobic. Zvinotoshamisa ndezvokuti, maitiro anobudirira zvikuru ehudyu mutsvuku ari kushanda, danho-aerobics, kushingaira kunotamba uye kutambanudza tambo. Chiuno chikuru chigumisiro chemafuta, uye miviri yeaerobic ndiyo nzira inobatsira yekubvisa mafuta.
Usakanganwa kudzora kudya kwako. Vasikana vakawanda havafungi kuti zvokudya zvavo, izvo zvakaita kuti kuwedzerwa kwemasentimita mashoma pachiuno, vacharamba "vachishanda" mune izvi, pasinei nekuita. Kana iwe uchitapudza mararamiro ezvokudya zvako kana kusanganisa mafuta, zvakabikwa uye zvinotapira zvokudya, achizvitsiva nezvibereko nemiriwo, zvigumisiro zvichaonekwa zvakakurumidza.
Zvechokwadi iwe unoshamiswa kuti ungaita sei chiuno chidiki pamba. Nhema dzinofadza pamusoro pezvinoita kuti zvisike zvishoma, zvinowanzoita kuti vasikana vasashandura kurota kwavo muchokwadi.
Nzira yekuita chiuno chakaonda: Kuedza
Purogiramu yakadaro, kunyange iyo inoratidzika seyisiri yepamusoro, ichaita kuti chiuno chako chitete zvishoma kupfuura dzimwe nzira. Chinhu chekutanga uye chinonyanya kukosha kukura kwekudya: michero yakawanda nemiriwo, pfupa shoma, mafuta, zvinotapira uye zvakakangwa!
Iyo yakaoma yezviito zvechiuno chinofanira kusanganisira zvinhu zvitatu zvikuru:
Kumhanyira, kutamba kana tambo (zuva rega rega, kutanga pamaminitsi gumi, zuva rimwe nerimwe uwedzere kweminiti, kusvikira uchisvika pamaminitsi 30-40). Izvi zvinobatsira kupisa mafuta mudumbu.
Kudzidzira nehangu yechiuno (zuva rimwe nerimwe twist the hoop, zvichida kushambadza kana kuyerwa, 20-30 maminitsi pazuva, kutanga nemitambo yemaminitsi 3-5). Inodzidzisa mitsipa yechipfuva.
Kurongedza nyore (rimwe zuva rimwe). Isa pasi, pasi pamakumbo, zvakanamiswa, maoko mushure memusoro, zvikande zvakasimba mumativi. Bvisa chifukidzo kubva pasi, uchichengetedza nzvimbo iri pakati pechiini nebhokisi nebhokisi. Tanga ne 3 nzira kusvika 10-15 nguva, wedzera mutoro vhiki rese. Izvi zvingabatsira kuwana mimba yakanaka.
Sezvo zviri nyore kwazvo kuita chiuno chidiki zvakadai nenzira iyi, nekodzero yekugadzirisa kwezvokudya, iwe uchawana zvikwaniso zvakajeka kare pavhiki yegumi nhatu yezvikoro zvese.
Ginger for weight loss - zvakanakisisa mapepa ekukurumidza kuora kurasikirwa
Diuretic Herbs yeUkushaya Kurasikirwa
PBK 20 yekurema
Nzira yekutanga sei kuora muviri zvakakodzera kumba?
Ndezvipi zvisingadzokeri kuburikidza nokutora mahomoni?
Hulahup nokuda kwekurasikirwa kwemazivi - sei kusarudza uye kushandura zvakarurama?
Tsvuku tsvuku inorema kurasikirwa
Mangosteen syrup pakurema kurasikirwa
Callanetics yokurasikirwa nekurema
Simba rakakosha yekurasikirwa
Sassi mvura yekutema kurasikirwa
Masks mu sauna kuti ure kurasikirwa
Eco Slim - sei kutora zvakanaka?
Lipiro augmentation ne hyaluronic acid
Wall wall reinforced concrete panels
Mapuroteni mumugero wemwana - kana iwe uchida kurira alamu?
Photoshoot muguta - pfungwa
Nheyo dzemitemo - mitemo yekusarudza nekushandisa nheyo yekushandiswa kwakakwana
Vhudzi Vomadzimai muchengeti
Ozzy Osbourne akabvuma kuti akareva nhema pamusoro pebonde rake
Gavin Rossdale anosangana naElin Nordegren
50 mifananidzo-uchapupu hwekuti makate anokura zvakakurumidza
Simira maruva kubva mumuti nemaoko ako
Mhando dzakanakisisa dzemarudzi
LED gland pande
Shanduro 2016 yevakadzi shure kwemakore makumi mashanu
Photosession ne soap bubbles
Mahomwe pakupedza chikoro 2017 - mafashoni emitambo uye zvinonakidza mazano ekugadzira chimiro chemavara
Ikoko, akaberekwa asina meso, akakwanisa kuwana shamwari!
Nzira yekudzidzisa sei uropi?
Charlotte ane tangerines - mapepa akareruka uye asina kujairika ezvokudya zvinonaka
Kim Kardashian akakwira muti zvachose usina kupfeka
Dudziro Dudziro - Kuberekwa nekududzirwa kweNharo dzakabatana neKubata